Maamulka Gobolka Hiiraan Iyo Ciidamada Ammaanka Oo Kala Dhex galay Maleeshiyaad Ku Dagaalamay Beledweyne – Radio Muqdisho
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo saakay ka dhacay dagaal beeleedyo u dhexeeyo beelo walaala ah oo wada dagaa magaaladaasi ayaa maamulka gobolka Hiiraan iyo ciidamada Ammaanka oo isugu jira Soomaali iyo AMISOM kuwaa oo ku guuleystay in ay joojiyaan colaadaasi.
Ciidammada Ammaanka oo ku hubeysnaa gadiidka dagaalka ayaa socod ku maray qeybo ka mid ah xaafadda Howl-wadaag, gaar ahaan meelihii ay ku dagaalameen maleeshiyo beeleedka, waxaana ay saraakiisa ku amreen horjoogayaasha maleeshiyada iyo waxgaradka dhinacyada dagaallamayay in xabada la joojiyo, loona dulqaadan doonin in lagu sii dul-dagaallamo dadka rayid ah.
Mas’uuliyiinta Maamulka Hiiraan iyo saraakiisha AMISOM oo la kulmay odayaasha iyo waxgaradka beellaha diriraya ayaa wadda jir u sheegay in mas’uuliyad ka saaran tahay ilaalinta nabad-galyada, sidaa awgeed looga baahan yahay labada dhinac in ay ka fikiraan cawaaqibka arrintan ka dhalan kara.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay inay jiraan colaado ragaadiyay horumarka gobolka, waxaana uu ku baaqay in bulshada gobolka ay Maamulka gacan ku siiyaan sidii looga hortagi lahaa falalka noocaam oo kale.
Ugu dambeyn, xaaladda ayaa waqtigan degan waxaana soconaya shirar kala duwan oo ay leeyihiin mas’uuliyiinta maamulka gobolka, saraakiisha ciidammada dowladda, AMISOM iyo odayaasha oo looga wadda hadllayo siddii looga fogaan lahaa dagaal danbe oo dhaca.